Myanmar Movies -သား နဲ့ ဓား (ရဲမငျးပိုငျ၊သတိုးစော၊ကြားသဈရဲညှနျ့)
ဇာတျကားအမညျ - သားနဲ့ဓား
သရုပျဆောငျ - ရဲမငျးပိုငျ၊သတိုးစော၊ကြားသဈရဲညှနျ့၊ဖွိုးရတာနာသှယျ၊မိုးမွငျ့မွငျ့အောငျ
ဒါရိုကျတာ - သတိုးစော
SEIN HTAY Film and Video Production & Distribution
This video is broadcasting by SEIN HTAY Flim Production Channel. The copyright is owned by SEIN HTAY.
Website Link - www.seinhtay.com/
Facebook Pgae - seinhtayvideoproduction
SEIN HTAY THpost Channel တှငျတငျဆကျပွသနသေော ရုပျရှငျ/ဗီဒီယိုဇာတျကားအား
တဈကားလုံးဖွဈစေ၊ တဈစိတျတဈပိုငျးဖွဈစေ ကူးယူ၊ဖွနျ့ခြိ ရောငျးခခြွငျး၊
ခှငျ့ပွုခကျြမရှိဘဲ OTT /Social Media Platform (THpost/Facebook စသညျ့ ..) မြားပျေါတှငျ
တငျဆကျပွသခွငျး၊တဈနညျးနညျးဖွငျ့အကြိုးစီးပှား ပကျြစီးအောငျ ဆောငျရှကျခွငျးမြားကို
လုံးဝ(လုံးဝ)မပွုလုပျပါရနျ အလေးအနကျ မတ်ေတာရပျခံ တားမွဈအပျပါသညျ။
ထိုကဲ့သို့ ပွုလုပျသူအား ဆကျသှယျရေး ဥပဒေ အရဖွဈစေ၊
#myanmarmovie #seinhtaymovie #ရဲမငျးပိုငျ
Vivo Shop วันที่ผ่านมา
ร้าน เขาวง 21 วันที่ผ่านมา
ရဲမင်းပိုင် ဇာတ်ကားဆို အရမ်းကြိုက်တာဗျ အမြဲအားပေးပါတယ်ဗျ
myo min 22 วันที่ผ่านมา
အားပေးနေတယ်နော် ကိုရဲမင်းပိုင် ဇတ်ကားများများတင်ပေးပါဗျ
Ko Zaw 23 วันที่ผ่านมา
Jira MobileOK 25 วันที่ผ่านมา
Huaei Hugg 26 วันที่ผ่านมา
myomin myomin 26 วันที่ผ่านมา
tone Tonetony 27 วันที่ผ่านมา
aungsanzar ni 27 วันที่ผ่านมา
Cung Pi 27 วันที่ผ่านมา
Samula zorzor 28 วันที่ผ่านมา
1993 နောက်ပိုင်းမင်းသားတွေ ဒီကားမျိုးတွေ တယောက်ကိုငါးကားလောက် လိုက်အတုခိုးရိုက်နေကြရတာ ဒီကားတွေကသက်သေပါလား ကင်မရာထရိတ်သုံးပြီးရိုက်တဲ့မင်းသားတွေလည်း ရှက်သင့်တယ် ရဲမင်းပိုင်က အမှန်အကန်ဖိုက်တာ အကြိုက်တွေချည်းပဲ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ကောင်းမှကောင်း ပြီးတော့ ဇာတ်သိမ်းလည်း လှတယ် ခုခေတ်က မင်းသားမင်းသမီးတစ်ယောက်သေမှ ဇာတ်ကားက ကောင်းတယ်ထင်ပြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတွေလည်း ကြောင်လွန်းနေတာသိကြ 😂 ပြောမိတာ များများ များသွားလား များသွားလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး 😎
Win Lwin 28 วันที่ผ่านมา
Si Thu Min 28 วันที่ผ่านมา
ရဲမင်းပိုင်း ဇာတ်​ကား​တွေများများထက်​​တင်​​ပေးပါ..စိန်​​ဌေး မိ့သားစု ကျန်းမာချမ်းသာပါ​စေ
Jkjd Bbxbc 28 วันที่ผ่านมา
Nan Hla aye 28 วันที่ผ่านมา
အထူးကျေးဇူးတင်တယ် ကိုရဲမင်းပိုင် ဇာတ်ကားတွေ တင်ပေးတဲ့အတွက် မိသားစုလိုက် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုိယ်၏ချမ်းသာခြင်းနဲ့ လိုအင်ဆန္ဒများပြည်ဝကြလို၏
Vivo Shop 28 วันที่ผ่านมา
ကိုရဲမင်းပိုင် ကတုံး ငှက်ကြီးတောင်ဓါး ဇာတ်ကားရှိရင်တင်ပေးပါ အိမ်ရှင်ကြိုက်တယ် အာပေးပါတယ်
บอย บอย 29 วันที่ผ่านมา
ကျေးဇူတင်ပါတယ် ရဲမင်းပိုင် ကားဟောင်းတွေတင်ပေးပါအုံး
Aung Htay 29 วันที่ผ่านมา
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ဦးရဲမင်းပိုင် ဇာတ်ကား များများ တင်ပေးပါ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ
Shein thu Shein thu 29 วันที่ผ่านมา
kyaw Linning 29 วันที่ผ่านมา
kotkin maung 29 วันที่ผ่านมา
ကျေးဇူးပါစိန်ဌေး ကားဟောင်းကားသစ်များများတင်နိုင်ပြီး တင်သမျ အောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းပါတယ်
Nn Ss หลายเดือนก่อน
Good. Ko ye
SEIN HTAY Film Production 29 วันที่ผ่านมา
အားပေးမူအတှကျ အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ ခငျဗြာ
Ko Min หลายเดือนก่อน
Vivo Shop หลายเดือนก่อน
ကိုရဲမင်းပိုင်ဇာတ်ကားကိုအရမ်းကြိုက်တယ် များများတင်ပေး ကျေဇူးတင်ပါတယ်
Wa Yu หลายเดือนก่อน
ကိုရဲမငျးပိုငျဇာတျကားတှေ မြားမြားတငျပေးပါ ခငျဗြာ
Soe Tint หลายเดือนก่อน
ရဲမင်းပိုင် မာလိန်မှုး မဲခေါင်ကားလေးတင်ပေးပါဦး ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် စိန်ဌေး မိသားစု ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ
Win Lay หลายเดือนก่อน
Nay aung หลายเดือนก่อน
ကွိုကျတယျ အမွဲတမျး အားပေးလြှကျပါ
SEIN HTAY Film Production หลายเดือนก่อน
Aung Aung หลายเดือนก่อน
ကိုရဲမင်းပိုင်း ဇာတ်ကားတင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်ကို
Than Zawko หลายเดือนก่อน
ရဲမင်းပိုင် ကားကြည့်ရလို့ အရမ်းကို ကျေနပ်မိပါတယ် တင်ပေးတဲ့ စိန်ဌေး ထုပ်လုပ်ရေးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Saw Dipa หลายเดือนก่อน
ฮามา ปลาย หลายเดือนก่อน
Sannyein 80 หลายเดือนก่อน
Oann Oanno หลายเดือนก่อน
သတိုးစော ၀င်းမိုးကျော် ထွန်းလုံရိန် ဗိုလ်မြင့်ရှိန် ကျော်ဝင်းထွဋ် ကျော်ရှိန်း ရဲသွေး နေသူရဦး အဲ့မင်းသားဇာတ်ကားဟောင်းတွေပြန်ကြည့်ချင်တယ်ရှိတင်ပေးပါ
้hoo hoo หลายเดือนก่อน
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှိ့ရင်တင်ပေးပါအုံး စိန်ဌေးရာပ်ရှင်
Naing Naing Myanmar หลายเดือนก่อน
ရဲမင်းပိုင် ရဲ့ ကျားလက်ဝါး ဇာတ်ကားလေး ရှိရင်ထပ်တင်ပေးပါဦးနော်
Winda Hamidia หลายเดือนก่อน
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကျန်းမာကျပါစေ နောက်လဲ တင်ပေးပါအုံးဗျာ ရဲမင်းပိုင်းကားတွေ
Ki Ko หลายเดือนก่อน
ရဲမင်းပိုင်ဇာတ်ကားတွေမျာများတင်ပေးပါ အရမ်းကိုကြည့်ချင်နေတာအခုကြည့်ရပြီး အရမ်းကိုကျေးဇူတင်ပါတယ်
luri setthang หลายเดือนก่อน
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် နောက်ထပ်လည်းရဲမင်းပိုင်ကားတွေ တင်ပေးပါဦး စိန်ဌေးမိသားစုကျမ္မာပါစေ။
Win Soe หลายเดือนก่อน
Good မိုကယ် မျာူ
moe nyo หลายเดือนก่อน
aungko kolin หลายเดือนก่อน
ကျော်ဇောဟိန်း နွား ဇာတ်ကား အဆက်တွေ တင်ပေးပါဦး
နေထက်လင်း ရဲမင်းပိုင် အောင်ပိုင် ကျော်ဇောဟိန်း မဟူရာည၏ပတ္တမြားပွင့် ဇာတ်ကား တင်ပေးပါ စိန်ဌေး
ไอที โฟน 29 วันที่ผ่านมา
Kaung Myat San หลายเดือนก่อน
ဆေးပေါင်ခတဲ့ည ဦးကျော်သူ သမုဒယလူကြမ်း ညီညီမင်းထက် နက်ပန်းနဲ့လက်သန်း ကျော်ရဲအောင်နဲ့ဝေယံအဲ့ဒီဇာတ်ကားဟောင်းတွေတင်ပေးပါလာ
Nelsonba Win หลายเดือนก่อน
ကျေးဇူးကမ္ဘာ စိန်ဌေး ❤❤❤
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရဲမင်းပိုင်ဇာတ်ကားတွေကိုတင် ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောင်ကိုလဲတင်ပေးပါဦးအကိုရေ့
win tun lat หลายเดือนก่อน
Myo Lay หลายเดือนก่อน
lin lin หลายเดือนก่อน
Only U หลายเดือนก่อน
puk puk หลายเดือนก่อน
Foe Thar หลายเดือนก่อน
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ရဲမင်းပိုင်းကားတွေတင်ပေးလို့ စိန်းဌေးမိသားစုအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ
ငရဲသား HD စဆုံး
Video SuBoo Entertainment
ဒီလိုပဲဖွဈရမယျဒီလိုပဲခဈြရမယျ (အကျရှငျ-စ/ဆုံး) ရဲမငျးပိုငျ သြှငျယှနျးသာ ခငျသီတာလှငျ
အန်တရာယျခဈြသူ - ရဲမငျးပိုငျ ၊ မြိုးသီရိကြျော ၊ ရနျနောငျ ၊ ခငျခငျြးဝငျး
Myanmar Movies - ငါ့အမြိုးကိုငါ့အရိုးနဲ့ခွံရိုးထိုး၍ကာကှယျမယျ ၁
KM Entertainment Channel
အသညျးထဲကကညျြ / အသည်းထဲကကျည်
Myanmar Movie - နှောငျကွိုးဖှဲ့သံဘောဇဉျ (ရနျအောငျ၊ဇငျဝိုငျး၊သူထူးစံ၊ပွညျ့စုံ၊စိုငျးသီဟ)
SEIN HTAY Entertainment
Myanmar Movies - သားဆိုးအမေ နမြေိုးအောငျ ခြိုပွုံး
Myanmar Tiger Movie Production
Shwe Nant Thar San Eain (Part 1)Yan Aung, Wai Lu Kyaw, Soe Myat Thu Zar, Nandar Hlaing, Moss, Moe De
ရူံးကြှဲ - အပိုငျး ၁(shone kyawl- Part 1) ကြျောသူ၊ မွတျကသေီအောငျ
Myay War Taung Nut Min (Part 1)Khant Si Thu, Soe Myat Thu Zar, Shet Tel
သာဒငျမာရငျ (အကျရှငျ-စ/ဆုံး) ရဲမငျးပိုငျ ဝယေံ ရဲမငျးနိုငျ ဟနျနီထှနျး